Inona avy ireo karazana ahona?
amin'ny alàlan'ny admin amin'ny 20-10-24
Ny Plain Weave no mpanenona lamba fampiasa mahazatra indrindra sy tsotra. Ny tadin-tsolika tsirairay (tariby mihazakazaka-mifanitsy amin'ny halavan'ny lamba) dia mandalo mifandimby mitaingina ny lamba (mameno na mitifitra tariby) amin'ny zoro 90 degre. Manana applica isan-karazany be dia be izy ...
1. Marika mihorona: Ireo marika misy tsipika amin'ny vodin-tariby tsy azo kosehina. 2. Lava vaky: tariby tapaka maro sosona amin'ny tranokala iray ihany mba hamoronana lavaka ambonin'ny. 3. Sombin-tany harafesina: novain'ny korosiana ny loko. Tondra-loko eo amboniny. 4. Wire tapaka: tapaka tariby tokana. 5. Tariby miverina: ...
Ahoana ny fandrefesana ny lamba tariby?
A: Space Cloth dia mamaritra ny faritra misokatra eo anelanelan'ny tariby mifanila. B: Mesh Count fantatra ho isan'ny baravarana isaky ny santimetatra. Ny fanisana ny harato dia azo aseho ho isa, sombiny, na isa roa raha tsy lamba specialty antsoina hoe lamba habaka - ny tsirairay ...